Waldhabdee Yamaniifi baqattoota Itoophiyaa: Hidhaa lammiilee Itoophiyaa istaadiyemii Yaman keessa - BBC News Afaan Oromoo
Kanneen keessaas irra jireessi lammiilee Itoophiyaa tahuu Dhaabbanni Godaantota Addunyaa (IOM) BBCtti himeera.
Waldhabdeen Yaman milishoonni Houthi 2015tti iddoowwan lixa biyyattii hedduu erga to'atanii as daran hammaateera.
Waraanni kun lubbuu lammiilee kumaatamaan lakka'aman galaafateera. Biyyattis beela hamaaf akka saaxilamtu godheera.
Jireenya lammiilee Itoophiyaa buufata baqattootaa Dadaab
Biyyattiin ammallee dargaggoonni hedduu biyyoota Gaanfa Afriikaarraa ka'uun gara Biyyoora Arabaatti imalaniif daandii itti qaxxaamuran tahuushee itti fufteetti.
Dubbi himtuun Dhaabbata Godaantota Addunyaa (IOM) Yaman, Olivia Headon BBCtti akka himtetti, ''Baqattoonni kunniin iddoo sakkatta'insaatti qabamanii gara istaadiyamii kubbaa miilaafi kaampii waraanaatti geeffaman''.
''Anis achi dhaqee ilaaleera. Istaadiyemichi namni kan keessa jiraachuu malu miti. Daran caccabeera. Balfaafi jijjiigni iddoo hunda jira,'' jetteetti.
Yaman godaantota seeraan alaa irratti to'annaa taasiftu cimsuunshee, to'annoo jala ooluu lammiilee kanneeniif sababa akka tahu dubbi himtuun kun eerti.
''Namoonni dubbisne baayyeen deebi'uu akka barbaadan nutti himaniiru,''
Baqattoonni guutummaan guutuutti fedhiin deebi'uu barbaadu taanaan, dhaabbanni isaanii deebisuuf qophii tahuus nutti himaniiru.
'Motoraan adamsanii nu qaban'
Erga Yaman seenee guyyoota 25 tahuu kan nutti hime, dhalataan Godina Jimmaa Aanaa Qarsaa Awwal Shee Naasir BBC'tti waan hime, ''Otoon konkolaataa dhiqa jiruu [Poolisiin] maallaqa boorsaa keessaa qabu narraa fudhatee, deemi naan jedhe,'' jechuun rakkoon isaa akkamiin akka eegale dubbata.
''Achii erga bakka biraatti godaanee ijoollee Oromoo biroo waliin walargee booda, ammas irra deebiin adamsanii nu qabatan,'' kan jedhu Awwal achiis mooraa waraanaa naannoo Magaalaa Sana'aa Oromoonni 3,000 ol tahan itti hidhaman akka geessanis dubbata.